လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်း ရွှေရောင် Razr ကို Motorola ရောင်းချမည်
Motorola ဟာ လူအများစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ခေါက်စမတ်ဖုန်း ရွှေရောင် Razr ကိုရောင်းချမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ရွှေရောင် Razr ဖုန်းကို နွေရာသီမှာ ရောင်းချမယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Motorola ကအနက်ရောင် Razr ကိုဒေါ်လာ ၁,၄၉၉ နဲ့ရောင်းချနေပြီး မှာယူမှုအသစ်တွေကို မတ် ၃ရက်မှာ ပေးပို့ပါမယ်။
Motorola ကရွှေရောင် Razr ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲဆိုတာ မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အနက်ရောင် Razr ထက်ဈေးနှုန်းမြင့်မားဖွယ် မရှိပါဘူး။ ရွှေရောင် Razr ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ အနက်ရောင် Razr နဲ့တူညီပြီး Snapdragon 710 ပရိုဆက်ဆာ ပါဝင်လာပါမယ်။ ဖုန်းရဲ့၆.၂လက်မအရွယ်ရှိ ခေါက်နိုင်တဲ့ ပလတ်စတစ် OLED panel ဟာကွေးနိုင် ခေါက်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ Motorola ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုအရ Motorola Razr ရဲ့ Razr ဟာအကြမ်းပတမ်း၊ တာရှည်ခံနိုင်ပါတယ်။
I was unsuccessful in buyingaRazr but I do haveareview unit. Been using for for awhile and am shooting the video review today. What do you want to know? I’ll try to address in the review 🙂
— Dieter Bohn (@backlon) February 10, 2020
Razr ဖုန်းကို အစောပိုင်း သုံးသပ်ချက်တွေအရ မျက်နှာပြင် ပြဿနာတွေနဲ့ ကင်မရာစွမ်းဆောင်ရည်နည်းပါးတယ်လို့ Android Central နဲ့ Input တို့က ဝေဖန်ထားပါတယ်။ Motorola အနေနဲ့ မီဒီယာပုံရိပ် ပြန်ကောင်းစေဖို့ အရောင်သစ် Razr ကိုမိတ်ဆက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။